Indlu yeHolide yaseSpadafora
Indlu efakwe kwipatio enkulu yangaphandle eneambrela, itafile kunye nezitulo, iimitha ezimbalwa ukusuka elwandle. Isibonelelo sasimahla sabathengi be-Wi-Fi, iTV yesathelayithi, umatshini wokuhlamba, kuwo onke amagumbi okulala anabalandeli besilingi
Indawo yokuhlala ibekwe kumgama omfutshane ukusuka elwandle, inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nayo yonke into efunekayo ukuze uziphekele; igumbi lokuhlambela labucala elineshawa kwaye lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba, isomisi kunye ne-bidet.
indawo ezolileyo kakhulu, uya kufumana indawo eqhelekileyo. Ulwandle lunomgama omfutshane, uya kufumana unxweme olukhululekile onokufikelela kulo, kunye nesanti ecocekileyo kunye neengqalutye, ulwandle lucacile. Embindini welali uya kufumana inqaba ephakathi, iicawa ezininzi, iivenkile, imivalo, iivenkile zepastry ukungcamla i-cannoli yaseSicilian, igranita kunye nazo zonke iimpawu zelizwe lethu; Kwakhona okuthathayo ukungcamla i-arancini yethu.
Ngesicelo siyafumaneka ukuba sikhaphe iindwendwe ezivela kwisikhululo sikaloliwe ukuya endlwini nasemva.
Ngaso nasiphi na isicelo, umba, ulwazi, zihlala zikhona.